Yini imbobo yokubonisa? - I-Digital Signage ne-Video Wall Software
Awekho amazwana ku Yini imbobo yokubonisa?Posted in Izincwajana zemininingwane By ClemPosted on 21 / 06 / 2021 21 / 06 / 2021 Umake cable, I-Digital Signage, display, bonisa isibonisi, ekhombisa, i-hdmi, Imbobo, emachwebeni, izimpawu, usb
Izinhlobo ezihlukile zetheku lokubonisa
Izinhlobo zembobo yokubonisa
Umehluko phakathi kwe-port port ne-HDMI
I-HDMI kuya ePort Port
Khombisa Imbobo ku-HDMI
Yini imbobo yokubonisa? Imbobo yokubonisa nayo engabizwa DP isixhumi esibonakalayo sedijithali esiklanyelwe ukuxhuma amakhompyutha ekubonisweni kwawo. Lobu buchwepheshe baklanywa eSillicon Valley, eCalifornia, ngasekupheleni kweminyaka yama-2000.
Enye yezimpawu zokuqala ukwamukela lobu buchwepheshe obusha kwaba Apple ngo-2008, kuhlanganiswa uhlelo lwe "mini display port" kumakhompyutha abo. Ngo-2009, Lenovo izophinde ihlanganise lolu hlelo olusha.
Kulesi sihloko, sizobona ukuthi yini imbobo yokubonisa nomehluko phakathi kwembobo yokubonisa ne-HDMI. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngehadiweji oyidingayo ukuze usebenzise i-Easy Multi Display, funda i-athikili yethu "Iyiphi i-digital signage hardware okufanele ngiyisebenzise?"
Imbobo yokubonisa iyisixhumi somsindo / sevidiyo sedijithali sokubonisa, ivumela ukudlulisa umsindo nencazelo ephezulu esikrinini. Inzuzo enkulu yetheku lokukhombisa amandla ayo we-bandwidth nekhwalithi yayo yomsindo / yevidiyo, kepha lobu buchwepheshe abuzange buthathe obunye ubuchwepheshe obunjenge-HDMI.
Inguqulo yokuqala: Khombisa iPort 1.0
Isekela amazinga wedatha we-10.9 Gbps
Inesiteshi se-bi-directional esisizayo se-1 Mbps
Uhlobo lwesibili: Khombisa iPort 1.2
Isekela amazinga wedatha we-21.6 Gbps
Ivumela i-4K kuma-fps angama-60
Isiteshi esisizayo sine-bandwidth engu-720 Mbit / s ngakho-ke singaphatha i-USB 2.0 ne-ethernet.
Uhlobo lwesithathu: Khombisa iPort 1.3
32.4 gbps umkhawulokudonsa
Ivumela imifudlana emibili ye-4k kuma-fps angama-60, ukusakaza okukodwa okungu-4k kuma-fps ayi-120, ne-3D enencazelo ephezulu
Isekela isibonisi esingu-5K RGB nesibonisi esingu-8K
Uhlobo lwesine: Khombisa iPort 1.4
Ubuchwepheshe obusha be-Display Stream Compression 1.2 (DSC)
Ukucindezela kokusakaza (3: 1)
Inika amandla i-8k kuma-30 IPS naku-4k HDR kuma-fps ayi-120
Uma sikhuluma ngezinhlobo ezahlukahlukene zamachweba wokubonisa, sikhuluma ngezixhumi ezahlukahlukene futhi njengamanje sinezimbili zazo okungukuthi "imbobo ejwayelekile"futhi"imbobo yokubonisa mini".
Itheku elijwayelekile lisetshenziselwa kakhulu ama-video monitors ngenkathi amachweba wokubonisa amancane esetshenziswa kumakhompyutha futhi ikakhulukazi i-Apple Macbook.
Lezi zimbobo ezimbili zisebenzisa izindlela ezimbili zokudluliswa kwedatha, yingakho lobu buchwepheshe obubili bukhona, ngoba "akuhambisani"kusuka ku-HDMI ukubonisa imbobo. Ngakolunye uhlangothi, imbobo yokubonisa isebenzisa Ukusayinwa Kokuhluka Kwevolthi Ephansi (LVDS) iletha ama-volts ama-3.3. Ngakolunye uhlangothi, i-HDMI isebenzisa ifayela le- Ukushintshwa Kwezimpawu Zokuhluka Okuncishisiwe (TMDS) ubuchwepheshe obuletha ama-volts ama-5.
Lobu buchwepheshe obubili abuhambisani ngale ndlela, ngakho-ke qaphela ngoba ungashisa izinto zakho ngokuhlanganisa lobu buchwepheshe obubili. Kodwa-ke, akukho okungenzeki, empeleni, ungashintsha kalula kusuka ku-HDMI ukhombise itheku ngokusebenzisa i- Isifaki khodi se-AV-over-IP DisplayPort okuvumela ukuguqula ukusakaza kube ukusakaza kwevidiyo ngaleyo ndlela kugweme noma iyiphi inkinga yokungahambelani.
Ngale ndlela, womabili la mafomethi ayahambisana kusetshenziswa ikhebula elilula elifakwe imbobo yokubonisa kanye nesokhethi ye-HDMI. Ngempela, lolu hlobo lwentambo lusebenzisa ama-volts angu-3.3 kokukhiphayo futhi luyiguqule lube ngama-volts ama-5.
Ukwazi kabanzi mayelana nokuthi yini imbobo yokubonisa
Izinhlobo ezahlukene ze-HDMI